CentOS7ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ အမြန်လမ်းညွှန်။ | Linux မှ
CentOS7ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ အမြန်လမ်းညွှန်။
ချစ်တယ် | | သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
FromLinux မှသူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဂရုမစိုက်တတ်သောတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မင်းကိုလမ်းပြရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်သားရဲ၏ဒရော့စ်ကိုတပ်ဆင်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အားစိုက်ထုတ်မှု၊ အလုပ်နှင့်အချိန်များစွာကုန်ကျပြီး၎င်းကိုလစဉ်လတိုင်းပြန်လည်စတင်ရန်ပင်ပန်းသည်။ :)
အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းငါ virtualize လုပ်မယ့် base system နဲ့ပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါအခြေခံစနစ်ကအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့သည် CentOS7နှင့် Gnome-Shell ကို ဒီပတ်ဝန်းကျင်ငါအရှိဆုံးတန်ဖိုးရှိရှိကတည်းက။
yum update && yum autoremove && yum သည် yum-plugin-priorities များကိုထည့်သွင်းပါ
၎င်းတို့သည် .rpm ကိုဒေါင်းလုပ် ချ၍ တပ်ဆင်သည်။
ယခုတွင်သင်သည်တည်ရှိသည် /etc/yum.repos.d သူတို့က repository တစ်ခုချင်းစီရဲ့အဆုံးမှာအသုံးပြုရန်အတွက်အောက်ပါ ဦး စားပေးများထည့်သွင်းပြီး၊ ဒီလမ်းညွှန်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ repos အားလုံးကိုပြင်ဆင်သည်။
CentOS-Base.repo အတွက် ဦး စားပေး = ၁၊ epel.repo ဦး စားပေး = ၁၀ nux-dextop.repo, ၁၀ ။ adobe-linux-x1_10.repo
# CentOS-Base.repo # # ကြေးမုံစနစ်သည်သုံးစွဲသူများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် IP လိပ်စာနှင့်မှန်တစ်ခုစီ၏ # မွမ်းမံမှုအဆင့်အတန်းကို အသုံးပြု၍ သုံးစွဲသူများနှင့်မတူသောပထဝီအနေအထားအရမွမ်းမံထားသောကြေးမုံများကိုရွေးချယ်ရန်အသုံးပြုသည်။ သင်သည်အခြား mirrors များကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခြင်းမဟုတ်လျှင် CentOS updates များကို # အတွက်အသုံးပြုသင့်သည်။ # # mirrorlist = သင့်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါကနောက်ကျောကျလာသည့်အခါ # အစားထိုးထားသော baseurl = line ကိုစမ်းကြည့်ပါ။ # # [အခြေစိုက်စခန်း] name = CentOS- $ ဖြန့်ချိ - Base mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/ လွှတ်ပေးရန် = $ releasever & arch = $ basearch & repo = os & infra = $ infra # baseurl = http: / /mirror.centos.org / centos / $ releasever / os / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 ဦး စားပေး = 1 # မွမ်းမံချက်များ [updates များ] name = CentOS - $ releasever - Updates mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? release = $ releasever & arch = $ basearch & repo = updates & infra = $ infra # baseurl = http: // mirror .centos.org / centos / $ releasever / updates / $ basearch / gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 ဦး စားပေး = 1 # ဖြစ်နိုင်တဲ့ထပ်ဆင့် package များ အသုံး ၀ င်ပါ [extras] name = CentOS- $ releasever - Extras mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/? ဖြန့်ချိ = $ releasever & arch = $ basearch & repo = extras & infra = $ infra # baseurl = http: / /mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/gpgcheck = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-7 ဦး စားပေး = ၁ # ထပ်ဆောင်းအထုပ်များ ရှိပြီးသား packages များ [centosplus] function ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးချဲ့သော ame = CentOS- $ releasever - Plus mirrorlist = http: //mirrorlist.centos.org/ လွှတ်ပေးရန် = $ releasever & arch = $ basearch & repo = centosplus & infra = $ infra # baseurl = http: //mirror.centos ။ org / centos / $ releasever / centosplus / $ basearch / gpgcheck = 1 enabled = 1 gpgkey = file: /// etc / pki / rpm-gpg / RPM-GPG-KEY-CentOS-0
အထက်ဖော်ပြပါ repos များကိုပြုပြင်ပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
yum install java-1.7.0-openjdk icedtea-web thunderbird Firefox plugin-ugly yum groupinstall "Development Tools" "Development Libraries" yum ထည့်သွင်း vlc lm_sensors unrar foomatic sensors-detect
ထိုအဆင်သင့်သူငယ်ချင်း။ ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CentOS7ကို is ပြင်ဆင်ထားပါပြီ
မင်္ဂလာပါနှင့် ၂၀၁၅ နှစ်သစ်ကူးမင်္ဂလာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » CentOS7ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ အမြန်လမ်းညွှန်။
26 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
အရမ်းကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့ :), ငါမေးဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ, centos လှိမ့်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်ဟုမှန်သလော
အဲဒီဆောင်းပါးမှာ CentOS စာပို့စာရင်းမှာလင့်ခ်ရှိတယ်။
ငါနားလည်ခဲ့တယ်၊ သူတို့က 7.x version ကိုထုတ်တဲ့အခါ Debian လိုပဲလုပ်လိမ့်မယ်။
မဟုတ်ပါ။ CentOS ရော RHEL ရော၊ Rolling Release မဟုတ်ပါ။
အဘယျသို့ပွုတျောမူပြီမီဒီယာ installation ကို Rolling ဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းပြပါရစေ။ CentOS အချို့ဗားရှင်းထွက်ပေါ်လာချိန် မှစ၍ တပ်ဆင်ထားသောမီဒီယာသည်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီအကြောင်းကြောင့်တပ်ဆင်မှုပြီးသွားရင်ရာဂဏန်းရှိတဲ့ megabytes (သို့) gigabytes တွေကိုအရင်မွမ်းမံချက်ထဲထည့်သွင်းရတယ်။
ယခုသင်လုပ်မည့်အရာသည် installation မီဒီယာတွင်ရှိသည့် update အားလုံးပါဝင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပထမမွမ်းမံမှုများသည် megabytes သာဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒီလမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါ Centos ကို install လုပ်ချင်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ငါမလုပ်ဘူး။ အဲဒါငါ့အတွက်အရမ်းများလွန်းတယ် ဘာလို့ညံ့ဖျင်းတဲ့ Centos ကို install လုပ်ဖို့လမ်းညွှန်မပေးတာလဲ။ ဒီဖြန့်ဖြူးရေးမှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တာအားလုံးနီးပါးကအင်္ဂလိပ်လိုပါ။
စကားမစပ်ပေတရု၊ ခရက်စ်သမ္မတနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာမင်းနဲ့တူတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကဘာလဲ။ မိန်းကလေးများ။ ။ ။ နေကောင်းလား?
ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကောင်လေးငါဒီမှာနေရတဲ့အကြောင်းရင်းကငါကချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနဲ့စပိန်ကြားမှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကြောင့်ပဲ D.
servos များ ဟုသူကပြောသည်
သင်လိုအပ်သည်မှာ ServOS ဖြစ်သည်။ CentOS 2.0 ကိုအခြေခံပြီး download လုပ်ထားသော version7ကို download လုပ်ပြီး Desktop အတွက်အသုံးပြုရန် gnome3 ကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်စတင်ထုတ်လုပ်ပြီး ၂၀၂၄ support အထိထောက်ပံ့သည်
LiveCD သည် Servers များအတွက်ရည်ရွယ်ထားပြီး၎င်းတွင်အခြေခံရှိပြီး 700MB ၎င်း၏ ISO ကိုယူထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်
သင်၏ LiveDVD သည်သင်၏ laptop သို့မဟုတ် PC ပေါ်တွင်စတင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များရှိပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ 🙂
၏ downloads ကိုရိုက်ထည့်ပါ http://www.serv-os.net စမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ နောင်တမရပါ 🙂
ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များ၊ Systemd ကိုအခြား init နှင့်ဘယ်လိုအစားထိုးရမယ်ဆိုတာကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်။
လူအပေါင်းတို့၏ပထမ ဦး ဆုံးမင်္ဂလာနှစ်သစ် 2015 :) ။ ကံမကောင်းစွာ (သို့မဟုတ်မ) systemd သည်အရာရာတိုင်းတွင်အကောင်အထည်ဖော်နေသောကြောင့် CentOS7မှထုတ်ယူ။ မရပါ။
ဒါတောင်မှ systemd တကယ်မကောင်းဘူးလားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်ရအောင်။ (ကျနော့်အမြင်အရပြproblemsနာတွေ (အနည်းဆုံး CentOS မှာ) ကပြန်ပြင်လိုက်တယ်။
သင်သည် systemd ကိုမနှစ်သက်သို့မဟုတ် ပို၍ unix တစ်ခုခုကိုမလိုလားပါကအခြားဖြန့်ဖြူးမှုကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ (ဥပမာ debian)၊ ကျွန်ုပ်သည် desktop ပေါ်တွင် systemd နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ဆာဗာများပေါ်တွင်မူရင်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်၊
Centos ကို server အဖြစ်မည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း။
အနည်းဆုံး cd ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ပါ။ သင်ဟာ X မပါဘဲ CentOS တစ်ခုရပြီးသင်ဆာဗာများအတွက်လုံလောက်သည်။
ငါဒီနေ့စမ်းသပ်နေတယ်၊ ​​အရမ်းကောင်းတယ်၊ ငါဟာ static ip တစ်ခုအတွက် overkill လို့ထင်ရပေမယ့် system ကိုချိုးဖောက်လို့ networkmanager ကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ Systemd လုပ်စရာတစ်ခုခုရှိလား။
@dhunter သည်မည်သည့် package ကိုမဆိုဖယ်ရှားရန်၊ လွယ်ကူစေရန်၊ terminal တစ်ခုမှ interfaces ကို configure လုပ်ပြီးတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
sudo systemctl NetworkManager ကိုပိတ်ပါ
NetworkManager ကို sudo chkconfig ပိတ်ထားသည်
sudo systemctl ကွန်ယက်ကို enable
ပြန် reboot သွား
၀ န်ဆောင်မှုကိုသင် ဆက်၍ အသုံးပြုနိုင်သည် ။- ၎င်းတို့သည်သဟဇာတဖြစ်သော command များကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်စတင်ရန်🙂
ဟိုဆေး Cuervo ဟုသူကပြောသည်
Jose Cuervo အားပြန်ပြောပါ
Vicdeveloper ပါ ဟုသူကပြောသည်
Centos7နဲ့ဘယ်လိုနေလဲ
အခြားပို့စ်တခုမှာတော့မင်းထင်မြင်ချက်မှာ fedora 21 ထက်ပိုကောင်းသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
ဒီတော့ vosware 11 နဲ့ gns3 1.2 ကို centos7မှာ install လုပ်လို့ရမလားလို့မေးချင်ပါတယ်။
ငါက xD ကို install လုပ်ဖို့သိချင်ပါတယ်
ငါမသုံးခင် opensuse 13.2 သုံးပြီးဒီပရိုဂရမ်နှစ်ခုကို run ခဲ့ပေမယ့် virtualizing ဖြစ်တဲ့အခါ
ကျွန်တော့်လက်ပ်တော့ vmware ထဲကပုံ ၃ ပုံကတစ်ခါတလေဆွဲထားတယ်။ ငါ့မှာ 3Gb ram နဲ့ i12 processor ရှိတယ်။
google မှာရှာဖွေခြင်း \_ t ကြည့်ရသည်မှာ cache cm သည် vmware ရှိထိုပုံများအတွက်အများကြီးတက်သွားသည်ကိုကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရသည်။ kde နှင့်
ငါ lxde မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ပုံမှာပြproblemsနာမရှိဘဲပြေးသွားတယ် (ပုံတစ်ခုစီမှာ 2gb ram ရှိတယ်)
ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ Desktop ကပိုမိုပေါ့ပါးသောကြောင့် XD? ငါ့မှာ 12GB ရှိလို့ RAM အများကြီးရှိသင့်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူထုတ်လိုက်တဲ့ ram cache ကထိပ်ဆုံး xD ဆီကိုရောက်သွားတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ဟဟ၊ မင်းက centos7နဲ့ဘယ်လိုလုပ်နေလဲလို့မင်းကိုမေးချင်ခဲ့တယ်။
; မင်းရဲ့ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငါ xD တော်တော်များများဖတ်နေတာ၊ မင်း freebsd ဘယ်လိုနေလဲ။ ငါ့လက်ပ်တော့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မလား။ ငါမှတ်ချက်ပေးသည့်အစီအစဉ်များရှိပါသလား။ haha နောက်တဖန်ငါခေါင်းစဉ် xD ထားခဲ့တယ်
မင်္ဂလာပါ။ CentOS7ကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ် သငျသညျနှစ်ခုအစီအစဉ်များကို install နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိပါတယ်။
FreeBSD အတွက်၎င်းကိုမည်သည့်အရာတွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆာဗာများ၊ ကွန်ပျူတာများ၊ လက်ပ်တော့များ၌ရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။ ဟုတ်ပါသည်၊ ကွန်ပျူတာနှင့်လက်ပ်တော့များတွင်၎င်းသည်မသက်မသာဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် FreeBSD ကိုဆာဗာများပေါ်တွင်သာအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။
ဝေယံ - ယူတီနီ ဟုသူကပြောသည်
Petercheco ဂျာကင်အင်္ကျီထက်ပို distro ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ Desktop ပေါ်ရှိ Freebsd သည် ပို၍ သက်သောင့်သက်သာရှိသော်လည်းအမှန်တကယ်ကြိုးစားရကျိုးနပ်သည်ထက်ပိုသည်။ Freebsd တွင်အတိုင်းထက်အလွန်အဆင့်မြင့်သောနည်းပညာများရှိသည်၊ ဥပမာအားဖြင့်တကယ့်အံ့သြစရာဖြစ်သော zfs နှင့် Dtrace ။ ပြီးတော့အဲဒါကို lennartOS (oops, sorry, systemD xD) လို့ခေါ်တယ်။
မင်္ဂလာပါ @ weyland-yutani
အခြားအရာအားလုံးမတိုင်မီမင်္ဂလာနှစ်: D. ငါ FreeBSD မကောင်းကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆာဗာများပေါ်တွင်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုသည်အလွန်လျှင်မြန်ပြီးအနည်းဆုံးကျနော့်အမြင်တွင်သူ့ဝမ်းကွဲ Linux နှင့်အခြားအဆင့်တွင်ရှိခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်ဆာဗာတွင်ဆက်လက်ထားရှိမည် အခြားသူများအကြားလုံခြုံရေးမှအကျိုးခံစားခွင့်ရန်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ pc နှင့် laptop များတွင် Gparted မရှိသောကြောင့် NetworkManager နှင့်ဆင်တူသည်။ ၎င်းသည် wifimgr နှင့်သို့မဟုတ် usb disk များကိုအမြဲတမ်းတပ်ဆင်ရန်ပြtheနာကြောင့်၎င်းသည်မထိုက်တန်ပါ။ ပထမတော့ငါစိတ်မပူခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ပထမလမှာ laptop ပေါ်ကနေငါရူးသွားတယ်။ D.
CentOS7ဟာကျွန်တော့်ကိုအရာရာတိုင်းနဲ့တွေ့ပြီးအရာရာတိုင်းကိုပြောဖို့လိုပါတယ်။ သူအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်တယ်။ systemd အတွက် ... Man၊ ငါအရမ်းသဘောကျသည်မဟုတ်၊ RHEL / CentOS တွင်အရာအားလုံးအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်စနစ်၏လည်ပတ်မှုတွင်ထူးဆန်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမတွေ့ရပါ။
မင်းရဲ့အနေအထားကိုငါသိတယ် ငါဟာ systemD မထွက်ခင်နှင့် / usr ပြောင်းလဲမှုမလုပ်ခင် Arch Linux ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသစ္စာရှိစွာအသုံးပြုခဲ့သူပါ။ ဒါကြောင့် Freebsd မှာကျွန်တော်ဟာရေ၌ငါးမျှားနေသလိုခံစားရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါက Arch အဟောင်းနဲ့ဆင်တူလို့ပါ။ ဥပမာ terminal ကိုသုံးခြင်း၊ mounting discs, DVD DVD ကိုမီးရှို့ခြင်းစတာတွေကိုသုံးဖို့စိတ်မပူပါဘူး။ ငါကြိုက်တယ်။ Freebsd ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ထပ်မံအဆင်ပြေပါသည်။ စကားမစပ် BSD လိုင်စင်ဟာ GPL ထက်ငါ့အတွက်ပိုကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ဟေး၊ ဒါကနောက်အကြောင်းအရာပဲ။
သငျသညျ virt-manager, libvirt နှင့် qemu-kvm နှင့် virtualize လျှင်သင်အခွင့်အလမ်းပိုကောင်းသည်ဟုထင်လျှင်၊ vmware သည်သားရဲဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့မင်းကြိုးစားကြည့်တဲ့အခါပြောရမယ်။
yum groupinstall "Development Tools" "Development Libraries" ကိုကျွန်ုပ်ရပါသည်။
တင်ထားသော plugins များ - fastestmirror, langpacks
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်: yum အုပ်စုများသည် convert ကိုအမှတ်အသားပြုသည် (man yum ကိုကြည့်ပါ)
cached hostfile ထံမှမှန်အမြန်နှုန်း Loading
* အခြေစိုက်စခန်း: mirror.tedra.es
* epel: http://ftp.cica.es
* အပိုပစ္စည်းများ: mirror.tedra.es
* updates များကို: mirror.tedra.es
သတိပေးချက် - အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ထည့်သွင်းရန်မည်သည့် package မျှမရှိပါ။
သတိပေးချက် - အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစာကြည့်တိုက်များမရှိပါ။
run နိုင်သည်။ yum groups များသည် install လုပ်ရန်အမှတ်အသားပြုသည် (man yum ကိုကြည့်ပါ)
မင်္ဂလာပါ၊ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး Fedora နှင့် CentOS အကြားခြားနားချက်… CentOS တွင်“ Development Libraries” ကိုမရရှိပါ။ Fedora တွင်လည်းရှိသည်။
ဒါပဲ။ "Development Tools" သည်အရာရာတိုင်းကိုသူ့ဟာသူထည့်သွင်းပေးသည်။
အိန်ဂျယ် -2021 ဟုသူကပြောသည်
လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း
Raspberry pi: NOOBS ကိုသိခြင်း (Raspberry pi တွင် distros များကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်)
Zuum P60 ၏အင်္ဂါရပ်များ